‘सांस्कृतिक मौलिक कलात्मक क्रियाकलापको माध्यमबाट आत्महत्या रोकथाम’ विषयक सत्संग सम्पन्न -
१० श्रावण २०७७, शनिबार १६:३५ हिमवत्खण्ड सम्बाददाताLeaveaComment on ‘सांस्कृतिक मौलिक कलात्मक क्रियाकलापको माध्यमबाट आत्महत्या रोकथाम’ विषयक सत्संग सम्पन्न
काठमाडौं ।‘आत्महत्या रोकथाम अभियान्ता तथा प्रगतिवादी युवा समाज नेपालका सल्लाहकार डा. नरेन्द्र सिंह ठगुन्नाले नेपालको मौलिक कला संस्कृति मानसिक स्वास्थ्यको लागि प्रभावकारी हुनसक्ने बताउनु भएको छ । प्रगतिवादी युवा समाज नेपालको आयोजनामा शुक्रबार आयोजित ‘सांस्कृतिक मौलिक कलात्मक क्रियाकलापको माध्यमबाट आत्महत्या रोकथाम’ विषयक सत्संगमा डा. ठगुन्नाले सो बताउनु भएको हो । सत्संगका प्रमुख वक्ता ‘ डा. ठगुन्नाले अत्महत्या का विभिन्न कारणहरु बारे जनकारी दिँदै नेपालका विभिन्न संस्कृति तथा आध्यात्मिक कार्यहरुले अत्महत्या कम गर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।
नेपाल मा मनाईंदै आएका विभिन्न संस्कृतिक कार्यक्रमले विषेश उर्जा प्रदान गर्ने भएकाले व्यक्तिगत र सामाजिक दुवै तहबाट आत्महत्याको जोखिम कम गर्न सकिने धारण राख्नु भएको छ । विभिन्न समुदायले मनाउने जात्रा, मेला, सांस्कृतिक नाच, गायन तथा अन्य विभिन्न कलाहरु मानसिक स्वास्थ्यका हिसाबले निकै लाभदायी रहेकाले जगेर्ना गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्नेमा डा. ठगुन्नाले जोड दिनु भएको छ ।
उहाँले नेपालको पूर्वी तराईको मिथिला चित्रकला, काठमाडौंमा मनाइने विभिन्न जात्रा र पश्चिम नेपालमा प्रचलित देउडा लगायत अन्य सांस्कृतिक नाचको कलात्मक पक्षलाई जर्गेना गर्दै मूलप्रवाहिकरण गर्न सके मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि प्रभावकारी हुने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ । सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुले मानिसलाई जाड्ने काम गर्ने भएकाले एक्लोपन लगायत अन्य धेरै मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पर्ने विषयहरु कम हुने उनले जानकारी गराउनु भएको छ । जसले अन्ततोगत्वा आत्महत्यालाई पनि कम गर्ने उहाँको भनाई छ ।
जुम प्रविधिमार्फत भएको सत्संगमा जरोकिलो महाअभियानका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द शरण उपाध्यायको पनि उपश्थिति रहेको थियो । सत्संगको अध्यक्षता प्रगतिवादी युवा समाज नेपालका अध्यक्ष धिरेन्द्र चन्द सोडारीले गर्नु भएको थियो भने सहजकर्ताको भुमिकामा उपाध्यक्ष उत्तम गुरङ रहनु भएको थियो । आयोजक प्रगतिवादी युवा समाज नेपाल, जरोकिलो महाअभियानको विशिष्टिकृत संस्था हो ।
पृथ्वी दिवसमा कौसी खेतीबारे अनलाईन तालिम
११ बैशाख २०७७, बिहीबार ०९:५० हिमवत्खण्ड सम्बाददाता
कोरोना राहत कोषमा नवकान्तीपुर सहकारीको थप सहयोग
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०९:४१ हिमवत्खण्ड सम्बाददाता
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५२ पुग्यो,१६ जना उपचारपछि घर फर्किए
१४ बैशाख २०७७, आईतवार १९:०८ हिमवत्खण्ड सम्बाददाता